लेख – Page2– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार ००:३५ English
तिमी मेरो हुन सकेनौ (प्रेम कथा) २६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:५१
सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने घोषणा गर्दा लाज लागेन सरकार ? १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १९:१०
बर्दिबास, महोत्तरी । मुलुकको ८० प्रतिशत विद्यार्थीको शैक्षिक भार थामेका मुलुकका सामुदायिक बिद्यालयहरु देशलाई आइपरेको बिपतिमा एकाकार भई आफूलाई क्वारेन्टाइनमा रुपान्तरण गरिरहेका छन् । यही बखत मुलुक नै निजि विद्यालयहरुको छाता संगठन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दिको मात्र..
गणतन्त्रको शल्यक्रिया १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:५८
रामकृष्ण आचार्य, रामेछाप, १५ जेठ । हाम्रो देशको अतीतलाई कोट्याउने हो भने यहा धेरै राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । कहिले सहज रुपमा त कहिले हजारौ नेपालीले देह त्याग गरेपछि मात्र परिबर्तन सम्भब भएका छन् । हामीले पनि देख्न पाएको एउटा परिबर्तन हो गणतन्त्रात्मक नेपाल । यो परिबर्तनमा..
विवाद समाधानको उत्तम उपाय मेलमिलाप ९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:४२
अधिवक्ता एवं मेलमिलापकर्ता विनीता गुरुङ विवादरहित समाज र समस्याविहीन मानिसको परिकल्पना सायद सम्भव नहोला । सामाजिक जीवनमा विवादहरु क्रमिक रुपमा भइ नै रहेका हुन्छन् । हरेक व्यक्ति आफैभित्र मनोद्वन्दले भरिएको हुन्छ । अनेकौं जातजाती धर्म संस्कार तथा वर्ग मिलेर बन्ने समाजमा..
लकडाउनका अवधिमा बढ्दो आपराधिक घटनाहरु ८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २१:३७
लेखक अधिवक्ता; दिपक कुमार बिष्ट कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा लागू भएको लकडाउनका बीच चोरी, हत्या र बलात्कार बर्बरतापुर्ण आपराधिक घटनाहरु बढेको पाईएकोछ। २०७७ बैशाख २९ सम्मको अवधीमा यातायातका कारणबाट घट्ने अपराधिक घटनामा कमी देखिएपनि चोरी जबर्जस्ती करणी आत्म हत्या तथा हत्या..
‘पाँच तारे होटेलले चैत्र यताको तलव दिएका छैनन्’ ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:३४
काठमाडौँ, ५ जेठ । श्रमिकहरुकै श्रमको वलमा विगतदेखि अथाह मुनाफा आर्जन गर्दै आएका पाँच तारे होटेलका साहुहरुले कोरोनाको निहुमा आफ्ना कामदार कर्मचारीहरुलाई गत चैत यताको तलव दिएका छैनन् । तर यिनीहरुले सरकारलाई भने वैशाख सम्मको तलव दिइसकेको भन्दै गुमराहमा राखेका छन् । विभिन्न वहानामा..
आत्महत्या संस्कार, कारण र रोकथामका उपाय १८ कार्तिक २०७६, सोमबार ०४:४१
पापी पेट पाल्नकै लागि दिनरात पसिना चुहाउनु पर्ने बाध्यता छ भन्छन् मकै पोल्ने दाइ । दिउँसो १ बजे बाट साँझ ६ बजे सम्ममा १ हजार २ सय सम्मको ब्यापार हुन्छ । घर धान्न मुस्किल छ, बाँच्न गाह्रो छ देशमा भन्छन् उनी । कसैलाई बाच्न गाह्रो, कसैलाई मर्न । कैयौँलाई दिनरात ज्याला मजदुरी गरेर पनि..
विप्लव, माइला लामा र निर्मलाः जसको हिजोको सम्बन्ध यस्तो थियो ! ६ कार्तिक २०७६, बुधबार १७:२३
काठमाडौँ, ६ कार्तिक । कसले बनायो दाजै उडी जाने बस हाम्रो देशै उडायो, हाम्रो साखै उडायो हरर उडेर नजाऊ न है नबनाई कहाँ हुन्छ आफ्नै देशलाई लाला र बाला, जहान बच्चा, चटक्कै छाडेर के लानु छ र हेपाइको मोराइ धन, पैसा जोडेर यही छ पानी, यही छ खानी चाहिन्छ जागिर यही छ धन, यही छ मन मायाको सागर कोही..
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनः कायापलट गर्ने परियोजना बन्न सक्छ ! ३ कार्तिक २०७६, आईतवार १५:१०
गेली शेर्पा, काठमाडौँ, ३ कार्तिक । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्टबाट नेपालले धेरै आर्थिक प्रगति गर्न सक्दछ । यो नदीलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सके नेपालले आर्थिक बिकासको मुहार बदल्न सक्दछ । सुनकोशी नदीले अन्य नदीजस्तै प्रसस्त संभावनाहरु बोकेरे बगेको छ । ती बिशाल संभावनाहरु हाम्रा..
श्राद्ध किन गर्ने ? ११ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:३३
जीवन र मृत्युको बीचमा एउटा मात्रै कुरा छ, त्यो हो सास । हामीले सास फेर्न छोड्यौँ या सकेनौँ भने मृत शरीरमा परिणत हुन्छौँ । मान्छे मरेपछि के हुन्छ ? कहाँ जान्छ ? यस्तै हुन्छ, यहीँ पुग्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले भन्न सकेको छैन । तर, पनि स्वर्ग र नर्कको परिकल्पना भने गरिएको छ । मरेपछि पनि सुखद..
सताब्दी पुरुष सत्यमोहनले देखेको कर्णालीको सिञ्जा उपत्यका १७ भाद्र २०७६, मंगलवार १२:०३
सत्यमोशन जोशी, काठमाडौँ, १७ भदौ । वि.सं. २०२६ सालतिर नेपाल राजकीय प्रतिष्ठानको संरचनागत परिवर्तन भयो । त्योभन्दा पहिला नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरक्षक र कुलपति दुवै पदमा राजा महेन्द्रवीरविक्रम शाह थिए । त्यो बेलाका उप–कुलपति भइरहेका व्यक्ति बालचन्द्र शर्माको निधन..
एनआरएनएका तीन तह : एक निर्मम अपरेसन ५ भाद्र २०७६, बिहीबार ०५:४७
कुनै पनि सङ्घ–सङ्गठनको नीति निर्माणमा दूरदर्शिता एउटा अपरिहार्य सर्त हो । त्यस्तै, अर्को सर्त हो– त्यसको कार्यान्वयन पक्ष । जतिसुकै दूरदर्शी निर्णय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भने त्यसले समाज वा सम्बन्धित प्रभाव क्षेत्रभित्र सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यसैले राज्यका..
भगवान् शिवका रूपले जगाएको आस्था २८ श्रावण २०७६, मंगलवार ०४:४२
साउन महिनाभरि सोमबार ब्रत बस्ने, शिवलिङ्गमा जल चढाउने चलन प्रत्येक वर्ष बढ्दै छ । भगवान् शिवप्रति आस्था र विश्वास राख्नेहरूले यो पवित्र महिनाभरि आफूलाई सकेसम्म शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गर्छन् । जान्ने हुँदादेखि नै सुन्दै आएको सोमबारको ब्रत बसे राम्रो र असल पति पाइन्छ रे । खै किन हो,..